Monday June 29, 2020 - 08:50:45 in News by Hadhwanaag News
"in madaxweynaha uusan maqlin ereyada ku jira muuqaalka"
Madaxweynaha Mareykanka, Donald Trump ayaa bartiisa Twitter-ka dadka kula wadaagay muuqaal muujinaya mid kamid ah taageerayaashiisa oo ku dhawaaqaya "awoodda dadka caddaanka ah".
Judd Deere oo ah afhayeenka aqalka cad ayaa sheegay "in madaxweynaha uusan maqlin ereyada ku jira muuqaalka, balse ay u muuqatay kalgaceylka taageerayaahsiisa".
Sanadkii 2017-ka, waxaa uu sidan oo kale dadka la wadaagay muuqal muujinaya kooxaha midigta fog ee Britain oo ku dhawaaqaya hadalo ay dad badan dhibsdaeen
Trump ayaa sidoo kale dhawaan mar uu ka hadlayay dilka ninkii madowga ahaa ee George Floyd, waxaa uu bartiisa Twiter-ka kusoo qoray "haddii bililiqada ay sii socoto, waxaa bilaabmaya toogashada", hadalkaas oo caro ballaaran ka dhaliyay dalka Mareykanka.
Dhanka kale ra'yi uruurin uu sameeyay telefishenka CBS ee dalka Mareykanka ayaa muujineysa in inta badan shacabka Mareykanka ay taageersan yihiin dhaqdhaqaaqa ay dadka madowga ah ku dalbanayaan cadaalad, ayna taasi horseedi doonta in dib u habeyn lagu sameeyo booliska Mareykanka.
Sida lagu ogaday ra'yi uruurinta la sameeyay, lix kamid ah tobankii qof ee Mareykan ah waxay sheegeen in aysan ku qanacsaneyn qaabka uu madaxweyne Trump u maareeyay kacdoonkii ka dhashay dilak Geotge Floyd, halka inkabadan kala bar dadkaasina ay aaminsan yihiin in madaxweynaha uu ku guul darresytay in uu fahmo walaac ay qabaan dadka dibadbaxyada dhigaya.